Samachar Batika || News from Nepal » कतै धेरै अण्डा खाएर मृ’त्युलाई चाँडो निम्तो त दिइरहनु भएको छैन ?
कतै धेरै अण्डा खाएर मृ’त्युलाई चाँडो निम्तो त दिइरहनु भएको छैन ?
एउटा मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनका अनुसार दिनमा दुईवटा मात्रै पनि अण्डा खाँदा यसले मुटुलाई हा’नी पुर्याउने र उमेर नपुग्दै मृ’त्यु हुने बताएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिदिन तीन सय मिलिग्राम कोलेस्ट्रोल खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने ख’तरा १७ प्रतिशतले र उमेर नपुग्दै ज्यान जाने खतरा १८ प्रतिशतले बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
उनीहरूले हप्तामा तीनदेखि चारवटा अण्डाहरू खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा ६ प्रतिशतले र उमेर नपुग्दै मृ’त्यु हुने ख’तरा ८ प्रतिशत बढ्ने बताएका छन् ।
दिनको दुईवटा अण्डा खाँदा पनि त्यसले यी ख’तराहरू क्रमशस् २७ प्रतिशत र ३४ प्रतिशतले बढाउँछ ।
‘हाम्रो अध्ययनले देखाएको भनेको यदि दुईजना मानिस उस्तै आहारमा छन् र उनीहरूबीचको फरक भनेको उनीहरूले खाने अण्डा मात्रै हो भने अण्डा खाने मानिसमा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हो,’ अध्ययनकी एक लेखिका तथा नर्थवेस्टर्न यूनिभर्सिटीकी उपप्राध्यापक नोरिना एलेनले भनिन् ।
यसअघि गरिएका अध्ययनहरूले अण्डा खानु र मुटुरोगको कुनै सम्बन्ध नरहेको देखाएकोमा यो नयाँ अध्ययन वि’रोधाभाषपूर्ण देखिएको छ ।
अण्डासम्बन्धी अन्तररासष्ट्रय निकाय इन्टरनेशनल एग कमिशनको सन् २०१५ को तथ्याङ्कले अमेरिकीहरू विश्वमा धेरै अण्डा खानेमा पाँचौ देशमा पर्छन् । जसले प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति दुई सय ५२ खान्छन् । तर त्यहाँ २० प्रतिशत मृ’त्युको कारण मुटुरोग हो ।
प्रकाशित मिति १२ कार्तिक २०७७, बुधबार ०५:५४